Cajiib: 3 Istaraatijiyado si aad u joojiso Spaming iyo Ballaarintaada
Waxaa jira tabo badan oo dadku u isticmaalaan si ay u helaan content ay muujiyaan internetka. Waxaa jira kuwa rumaysan in habka kaliya ee ay u heli karaan dhagaystayaasha si ay u fiiriyaan iyaga oo ah iyaga oo si joogta ah u dhexgalaya. Inta badan spammers waxay badanaa leeyihiin fikirkan. Waxay tan ka soo iibsanayaan suuqyada iyo xayeysiiyayaashu isticmaaleen tobannaan sano. Waxay u isticmaaleen inay sameeyaan qeylo ku filan waqtigii TV-ga, iyo boosaska majaladda, qof ayaa ugu dambeyntii u sheegi lahaa. Istaraatiijiyadu waxay leedahay hal khalad:
Qofna ma doonayo in uu ku dhibo waxyaalihii ay u baahnaayeen ama farriimaha aan lahayn wax ku habboon - what does computer expert mean. Qiimaha ugu qiimaha badan ee dadku ku leeyihiin dunidan mashquulka ahi waa wakhtiga. Hase yeeshee, waxaa jira bloggers, qorayaal, iyo xayeysiiyayaal kuwaas oo wali isku dayaya inay ogaadaan iyagoo isticmaalaya istaraatiijiyadan joojinta maalin kasta. Iyaga oo ah, habka kaliya ee dadku dhegeysanayaan waa haddii ay sii wadaan hadalka. Waa hagaag, waxaa jira suurtogalnimo sare oo ayan noqon doonin, haddii aad ka mid tahay kuwa leh istaraatiijiyad noocaas ah, waa inaad joojisaa. Waa wax si cad u xanaaqsan inta naga hartay.
Michael Brown, oo ah takhasus sare oo ka kooban Semt , wuxuu hubiyaa in habka ugu fiican ee lagu ogaan karo ay tahay in la joojiyo dhawaaqa iyo dhisida mashaariic ku filan waxa uu ku heli doono dareenka dadka.
Saddex waxyaalood oo aad u baahan tahay inaad hesho
"Suuqa Gaadiidka," Seth Gordon waa buug ka hadlaya saddexda qodob ee lagama maarmaanka u ah fariin kasta oo qiimaheeda ah inuu akhriyayo: rajada, ujeedka, iyo habka shakhsi ahaaneed. Xiriiriyeyaashu waxay jecel yihiin inay helaan dhagaystayaal maxbuus ah. Si kastaba ha noqotee, habka kaliya ee lagu ogaanayo haddii dadku ku qabtaan wax aad bixiso waa haddii ay kuu oggolaanayaan inaad soo bandhigto. Wax kasta oo maanta ah waxay la shaqeeyaan fasax. Tusaale ahaan, waxyaabaha sida caadiga ah sida adeega adeegga, amar bixinta, ama xitaa filaya taariikhda qof, dhammaantood waxay leeyihiin wax aad filayso ilaa aad u ogolaato qof inuu kuu soo diro farriinta.
Maqnaanshaha sidoo kale waa lagama maarmaan maxaa yeelay waxay muujineysaa inta aad daryeesho farriin gaar ah. Haddii dhagaystayaashu aanay dareen ka bixin waxyaabaha ay ka kooban tahay, ma ahan wax fiican sida ay u dhawaaqi karto. Dadku ma rabaan inay dhagaystaan. Sidoo kale waxay u dhacdaa fariimaha ay u maleynayaan inaysan ku xirnayn iyaga ama kuwa aan ku qancin heer shakhsiyeed.
Waa inaad noqotaa wax aad u yar
Dunida maanta waxay la kulantaa tartan iyo buuq badan, qof kasta oo doonaya in la ogaado ama maqlo. Sidaas awgeed, macnaheedu waxa weeye in aad halis u noqon karto codka guud ahaan haddii aadan ku habboonayn mawduucaaga si gaar ah suuqa. Dadku ma xiiseeyaan "caadi" mar dambe. Qof walba waxa uu rabaa wax ka baxsan caadiga ah, wax "walaac"..
Blogs, ama nooc kasta oo kale oo ka mid ah moobiilka, ayaa kuu oggolaanaya inaad fuliso saddexda arrimood ee lagusoo jeediyey boostadan. Sii dadka si aad ugu qorto, u bixiso farriin isku xiran, oo isticmaali qaab gaar ah.
Dadku waa in ay fahmaan in dhismaha noocaas ahi uu u baahan yahay wakhti iyo ogolaansho badan. Laakiin fikradu maaha mid aan macquul ahayn. Waxay u baahan tahay kaliya dadaal dheeraad ah
Waa wax ku saabsan fasax
Halkan waa liis afar talaabo oo sahlan oo aad isticmaali karto si aad u abuurto jaanis ay dadku daryeeli karaan oo ay qiimo u leeyihiin:
1. Iska xakamee dareenka joojinta. Kuwaas waxaa ka mid ah isku day kasta oo lagu qayliyo, qaylinayo, ama codsado in la maqlo. Hal waddo ayaa loo isticmaali karaa isticmaalka boodhadhka spam si loogu soo celiyo farriimaha spam iyadoo rajada ah in qofka isticmaalaa uu isku xiro xiriirka kaas oo soo celinaya bogga dirawalka.
2. Ka bilow waxa aad taqaanid. Wax kasta oo aad ku fiicantahay, u adeegso si aad u dhisto aasaaska mawduuca, iyo habka loo wadaago khibraddaada
3. U ogolow dadka leh fursad ay ku dhageystaan. Xaaladda aanad haysanin markaad hesho qof dareenkiisa, si daacad ah u sameeya, iyo ixtiraamka ugu sarreeya.
4. U dhageyso dhagaystayaashaada wax cajiib leh. Haddii aad dareenka hesho, ha ku dhicin fursadan. Soo bandhig tayadaada, iyo haddii aad awoodi kartid, iska ilaali caqabadaha aadna uga sarreyso filashadooda.
Adiga, dabcan, waxaad haysataa ikhtiyaari inaad iska dhego tirto talooyinkan gebi ahaanba oo aad gacmahaaga ku hayso hawada oo rajeynaysa in qof uu ogaado. Xitaa waxaad heli kartaa dhowr qof oo dareenka kuu ah. Dhibaatadu waxay tahay in xilliga ay ka helayaan waxyaabo badan oo kaaga duulaya adiga, waxay illoobi doonaan waxa aad bixinayso.
Marwalba xusuuso in habka aad ku guuleysanayso dhagaystayaashu ay tahay sidaad uhesho. Haddii ay ku jirto jahawareer, markaa waa inaad joojisaa daawadayaasha ilaa intaad haysato wax aad soo bandhigto, adiga iyo adiga, ama dhagaystayaashu waxay rabaan.
Habka kaliya ee aad ku heli karto dareen waara oo ku saabsan mawduucaaga waa haddii aad kasbato. Muuji, weydiiso ogolaansho, iyo u dhiibo. Farsamo kasta oo kale hadda waa uun shamis oo ugu dambeyn la iska indho tiri doonaa